Rabshadaha ku sii badanaya Malmö iyo xalka dowladda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bolis baaraya gaari ku qarxay Malmö. sawir: Johan Nilsson/TT
Rabshadaha ku sii badanaya Malmö iyo xalka dowladda
"Xataa 10 sanno xariga ah igama celiseen hub in aan qaato"
La daabacay onsdag 30 augusti 2017 kl 11.36
Rabshada ah xabadeynta iyo dilalka ayaa ku soo badanaya ayaamahaan magaalada Malmö.
Sannadkan keliya tiro ka badan 40-goor ayey is xabadeyn laga soo sheegay magaaladan.
Dhibaatada sii kobcaysa ee ay geysanayaan ganga burcadda ah iyo ka qobqobnaata bulshada ayaa xukumadda doonaysaa in ay hadda uga hortagta sharciyo adag oo hubka ah iyo dadaalo bulshadu goor hore ku dhaqaaqdo, sida uu sheegay wasiirka cadaaladda Morgan Johansson oo maanta booqasho ku tagaya magaalada Malmö
– Marka hore waxa loo baahan yaahay in la qaado tillaabooyin adag oo xabsiyada la dhigo waddooyinkana looga arruuriyo kuwa ku firfircoon falalka degbiyada. Halka tillaabo kale ay ahaan karto dadaalo bulsho oo goor hore lagu saacido da’yart qatar ugu jirta in ay faraha la galaan dembiyo oo ku biiraan burcadda, ayuu yeri wasiirka cadaaladda Morgan Johanssonn oo saakay la hadlayey barnaamijka P1-morgon ee raadiyaha Sweden.
Waxaa soo badanaya da’yarta iyaga oo hubsan banaanada ku wareegaya. Wasiirka cadaaladda Johansson ayaa doonaya in la adkeeyo sharciga hubka lana kordhiyo cinqaabta oo laga gaarsiiyo labo sanno debiyada hubka ee culus halka ay maanta ka tahay hal sanno. Arrintan ayuu amiinsan wasiirku in ay u sahli doonto boliska sidii ay waddooyinka uga arruurin lahaaayeen burcadda kuwooda ugu qatarta badan.
– Ma ahan keliya in xabsi aad ku jiri doontid waqti dheer balse sidoo kale xilliga jeelka lagu sii haynaya intaa maxkamad lagaa soo taagayo oo lagu sii deyn maayo, ayuu yeri.
Laakiin sharciga hubka oo la adkeeyo ma ahan wax Mortada Yousef u malaynayo in ay wax soo kordhin doonto. Youset ayaa ku soo koray xaafadda Rosengård, waxaa yaraantiisa soo ahaa dambiile balse hadda ayaa iska dhaafay howlahii dembiyada.
– Hub ayaan wadan jiray badanaa, hadana da’yarta hubaysan maalin iyo habeynba waa soo bateen. Xataa 10 sanno oo xarig ah igama celiseen hub in aan qaato. Marka sidaas u da’yartay kama fakeraysid cinqaab iwm.